Ny fahasamihafana eo anelanelan'i Karaiba sy Pasifika any Meksika
Ny Pasifika Meksikana vs. Karaiba Karaiba: Inona no mety ho anao?
Caribbean vs Pacific
Ho an'ny fitiavana ny sary / Getty Images
Ny faritra roa any Meksika dia manolotra ireo mpitsidika eran-tany, trano fandraisam-bahiny sy hetsika, fa ny andrefana sy ny atsinanana dia tsy mitovy. Ny morontsirak'i Pasifika dia misy hantsana mahavariana sy mahatsapa ho mafonja, raha fantatra kosa ny faritra Karaiba amin'ny sandan'ny fotsy, ny rano aqua ary ny fivoahan'ny lohataona. Manolotra fialantsasatra manokana ho an'ny fialantsasatra Meksikana ny tsirairay, kanefa ahoana no ahafantaranao izay mety aminao? Ireto misy soso-kevitra sasantsasany hanampy amin'ny famolavolana ny faritra atsimon'ny sisin-tany.
Raha tianao tahaka Tequila
Tequila dia mora hita any amin'ny zorony rehetra any Meksika, fa raha mitady bebe kokoa noho ny tavoahanginao amin'i Jose Cuervo ianao, dia tsidiho ny Casa Kimberly any Puerto Vallarta any amin'ny morontsirak'i Pasifika.
Mametraka ao amin'ny trano fialofana an'i Elizabeth Taylor sy Richard Burton teo aloha, ny Iguana Tequila Bar dia manasongadina ny sasany amin'ireo fanahy malemy ao amin'ny firenena. Manana traikefa tequila sy mezcal ny mponina mba hitarika ireo tequila tia sy ny neophytes amin'ny alalan'ireo fanatitra avo lenta, ny ankamaroany ao amin'ny faritra manodidina an'i Jalisco .
Raha toa ianao tia spaoro
Na aleonao any amin'ny trano fialan-tsasatra eny amoron-dranomasina na ny traikefa an-jatony miaraka amin'ny akanjo lava sy siramamy tadiavinao, Meksikana no nandrakotra anao.
Ho an'ireto farany dia mitodika miantsinanana mankany amin'ny tranombakoka Gem ao amin'ny Grand Fiesta Americana Coral Beach Resort sy spa ao Cancun, izay mazerà any Thailandy no mamboatra kinky mafy amin'ny fampiasana vatosoa sarobidy toy ny jade sy obsidian ary na ny vovo-bolamena sy ny vovoka diamondra aza. Misy koa ny lalam-pandehan'ny rano mahavariana feno sona misy ranom-boankazo sy setroka mangatsiaka napetraka teo amin'ny habak'ity 40 kilometatra toradroa ity.
Raha tianao golf ianao
Any amin'ny farany avaratry ny Riviera Pasifika, ny Nayarit dia ny toerana misy ny filaminana ao Punta Mita, izay miparitaka eny amin'ny tora-pasika fotsy fotsy ambany. Ho fantatra amin'ny alàlan'ny mpilalao surferina ho toy ny toeram-pialan-tsasatra tonga lafatra, izy io koa dia toerana tsara indrindra ho an'ny mpankafy golf.
Saingy nandrakotra anao ihany koa ny faritra Karaiba. Misy roa i Jack Nicklaus no manamboatra fianarana any Fairmont Mayakoba, iray amin'ny lavaka napetraka ao amin'ny volkano misy azy avy amin'ny volkano - ilay hany maitso eran-tany napetraka ao amin'ny nosy iray mahazatra.
Raha toa ianao ka tia sakafo Gourmet
Misy fotoana sy toerana manokana ho an'ny karnitas karnitas karnitas amin'ny iray amin'ireo toeram-pivarotana mivezivezy ao Meksika, fa ny firenena ihany koa dia manome tolotra gourmet mendrika an'i Paris na tabilao tsara indrindra ao New York.
Miaraka amin'ny morontsiraka misy ranomasina ao Karaiba eo amin'ny Riviera Maya, ny trano fisakafoanana any Fairmont Mayakoba dia safidy iray. Manolotra ireo menok'i Meksikana, Aziatika sy Latino-natsangan'ny sekretera Richard Sandoval, chef fanta-daza dia hahita fa ny moron-dranomasina dia manjaka ao amin'ny carte du jour, izay manamarika ny sakafo toy ny orkita Yucatan na ny balsama San Blas jumbo.
Ny atsimo manoloana ny lalana tondra-drano boho-chic ao Tulum, ny transplantant NYC sy ny chef Eric Warner dia nivadika ho ny fitaovana Mayan ao an-toerana amin'ny sangan'asa kulinarina izay tsy misy afa-tsy ny giro iray mirehitra.
Raha tianao tahaka ny design
Mar Adentro Cabos, trano fandraisam-bahiny madinika manerana an'izao tontolo izao
Mifindrafindra an'i Luis Barragán - araka ny asehon'i Fernando Romero, mipoitra eran-tany, Museo Soumaya ao Mexico City, manova ny tontolo Meksikana amin'izao fotoana izao ny vanim-potoana vaovao misy ny architects ankehitriny.
Ohatra tsara dia ny hotely Miguel Ángel Aragonés Mar Adentro ao San José del Cabo any amin'ny tendro atsimon'ny Saikinosy Baja. Ny endriky ny endriky ny endriky ny endriky ny minimalista dia marevaka, fotsy fotsy izay midika ho toy ny nosy mitsinkafona manjelanjelatra, ary misy trano fialamboly mafana izay rakotry ny rafitra vita amin'ny kofehy vita amin'ny kokona.
Raha toa ianao tia mitsangatsangana
Hotel Esencia, trano fandraisam-bahiny madinika manerana an'izao tontolo izao
Manodidina ny 6000 kilaometatra amin'ny morontsiraka mankany amin'ny anarany, Meksika dia nofinofin'ny mpandeha an-dranomasina .
Na dia misy ranomasimbe mivelatra be aza ny morontsiraka roa, dia ny morontsirak'i Meksika izay manasongadina ny palmie Instagram-tsara, ny fasika fotsy sy ny bikan'ny rano.
Matetika ny fiaramanidina miolikolika no misy ny tora-pasika Pasifika any amin'ny morontsirak'i Pasifika, ary ny habakabaka dia hita any amin'ny toerana sasany, fa matetika no fantatra ny onjam-peo maranitra, ka mahatonga ny moron-dranomasina ho lasa paradisa marina.
Raha toa ianao tahaka ny toeram-ponenana rehetra
Ny habetsahan'ireo toeram-ponenana rehetra ao Meksika dia hita any amin'ny fanjakan'i Quintana Roo mitambatra ao Karaiba. Eto ianao dia hahita toerana malaza toy ny Cancun, Cozumel ary Playa del Carmen , izay feno trano fonenana izay manolotra margaritas tsy misy fiafarany.
Ny safidy dia avy amin'ny teti-bola ka hatramin'ny farany, tsy dia mahazatra loatra ny manana toeram-pisakafoanana sy trano fisakafoanana am-polony maro manomboka eo amin'ny trano fisakafoanana tsotra sy fisakafoanana, mba hanehoana hatsaran-tarehy fisehoana an-tsarimihetsika nasehon'i Michelin tamin'ny filoha.
Torolàlana mankany Visiting Chichén Itzá
Andron'ny Mpifankatia any Meksika
Janoary 2018 Fety sy zava-nitranga tany Meksika
Top 7 Drinks to Try in Mexico
Mankalaza ny Spring Equinox any Meksika
Fihetseham-po mahatsikaiky mikasika ny Fanahin'i Jefferson
Manorata ny fitsangatsanganana amin'ny fiatombohan'ny fitsapana tsara indrindra
Mivadika ao anatin'ny tontolo mivaivay - Mila EarthRoamer ianao
REVIEWS: Miraval Spa, Tucson, Arizona
Torohevitra ilaina amin'ny fitondrana any Kanada
Ny Krismasy Krismasy tsara indrindra any Alemaina
4 amin'ireo Park RV tsara indrindra any avaratr'i Meksika
Fampidirana any Torkia: Sarintanin'ny Travel and Guide
Toeram-pisakafoanana pizza Tastiest any Tacoma
The 11 Scariest Roller Coasters any Amerika Avaratra
Toe-draharaha telo izay nanjary fotoana nahafantarana
5 Toro-hevitra ara-tsakafo mialoha ny sambo